Zucchini र mozzarella gratin | बेजिया
मारिया vazquez | 21/06/2022 10:00 | अद्यावधिक गरियो 24/06/2022 09:22 | सलाद र तरकारीहरू
आज बेजियामा हामी एक धेरै सरल नुस्खा तयार गर्छौं जुन हामीलाई लाग्छ कि रातको खानाको लागि उपयुक्त छ, ए Zucchini र mozzarella gratin। अण्डा, जुचीनी र चीज, यो संयोजन संग, के गलत हुन सक्छ? ग्रेटिन स्वादले भरिएको छ तर, एकै समयमा, यो धेरै नरम छ, यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!
हामी भन्न सक्छौं कि यो एक द्रुत नुस्खा हो तर हामी झूट बोल्छौं। हामी तपाईलाई के आश्वस्त गर्न सक्छौं कि तपाईले यसलाई तयार पार्न धेरै कम काम गर्नुपर्नेछ। यहाँ धेरै जसो काम ओभन द्वारा गरिन्छ। र यो छ कि ग्रेटिन कम्तिमा 30 मिनेट यसमा खर्च गर्नुपर्छ।
ओभन मार्फत जाँदा अण्डाको मिश्रण सेट हुन्छ, चीज पग्लन्छ र ग्रेटिन लिन्छ। राम्रो सुनौलो रंग। अवयवहरू धेरै सरल छन् तर यदि तपाइँ ग्रेटेड मोजारेला फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ अर्को प्रकारको ग्रेटेड पनीर वा यहाँ सम्म कि नुस्खा बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। कुटीर पनीरको साथ.
G० g grated मोजारेला
१20 g कर्नस्टार्च
जुचीनीलाई राम्रोसँग धुनुहोस् र तिनीहरूलाई 1 सेमी स्लाइसहरूमा काट्नुहोस् बाक्लो, टिपहरू त्याग्दै।
तिनीहरूलाई भाप केही मिनेट, थोरै नरम नभएसम्म।
जबकि, प्याज काट्नुहोस् लगभग, केहि हरियो भाग सहित।
एक पटक जुचीनी नरम भएपछि, यसलाई कोल्यान्डरमा राख्नुहोस् र यसलाई निकास दिनुहोस् २० मिनेटको बखत।
त्यो समयको फाइदा लिनुहोस् एक कटोरामा अण्डा हराउनुहोस् र तिनीहरूलाई चीजसँग मिलाउनुहोस्, 2/3 कटा वसन्त प्याज, मकैको स्टार्च, जायफलको एक चुटकी, नुन र काली मिर्च।
पछि झरना ग्रीस तपाईंले प्रयोग गर्न लाग्नुभएको ओवनको लागि।
तलमा zucchini राख्नुहोस् र त्यसपछि कचौराबाट माथिको मिश्रण खन्याउनुहोस्।
प्याज विभाजन गर्नुहोस् शीर्षमा बाँकी र ओवनमा लिनुहोस्।
180 डिग्री सेल्सियसमा बेक गर्नुहोस् लगभग 25 मिनेट वा अण्डा सेट नभएसम्म र त्यसपछि सुनौलो खैरो नभएसम्म थप5मिनेट au gratin।
तातो जुचीनी र मोजारेला ग्रेटिनको मजा लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » सलाद र तरकारीहरू » Zucchini र mozzarella gratin